Jubbaland oo sheegtay amarada lagu soo rogay Kismaayo inay yimaadeen, markii la helay xogga amniga ku saabsan – Banaadir weyne
Jubbaland oo sheegtay amarada lagu soo rogay Kismaayo inay yimaadeen, markii la helay xogga amniga ku saabsan
Kismaayo – Maamulka Jubbaland ayaa waxa uu faah faahin ka bixiyay awaamiirtii Talaadadii shalay lagu soo rogay Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose.
Awaamiirtan oo ku aadanaa in la xiray xuduudaha Magaalada Kismaayo ayaa waxaa soo saaray Guddiga Amniga Jubbaland, kuwaa oo iclaamiyay in si ku meel gaar ahi loo joojiyay isu socodkii gaadiidka dhulka, badda iyo cirka.
General Cabdi Mahdi C/salaan, La-taliyaha dhinaca ammaanka ee Madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in awaamiirtan la soo saaray, ka dib markii Guddiga Amniga Jubbaland uu warbixino ka dhageystay hay’adaha ammaanka Jubbaland, isla-markaana uu garwaaqsaday inay dhici karaan falal liddi ku ah amniga, inta ay doorashada socoto.
General Cabdi Mahdi ayaa xaqiijiyay in xanibaadda lagu soo rogay Magaalada Kismaayo ay jiri doonto inta u dhaxeyso 20-ka illaa 23-ka bishan oo ku aadan maalinta Jimcaha.
General Cabdi Mahdi ayaa intaa ku daray in la joogteeyay dhaqdhaqaaqyada Ciidamada Booliska Jubbaland iyo Booliska Amisom, si ay u xoojiyaan ammaanka goobta doorashada.
Khamiista berrito oo taariikhdu ay ku beegan tahay 22-ka bisha August ayaa waxaa lagu wadaa in Magaalada Kismaayo ay ka qabsoomto Doorashada Madaxweynaha Jubbaland, waxaana wax dooranaya Xildhibaanada Baarlamaanka Jubbaland. – Universal TV Somali